No. 2085, Friday, March 15, 2019 | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Issue » No. 2085, Friday, March 15, 2019
No. 2085, Friday, March 15, 2019
၁၃၈၀ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း ၁၀ ရက် (သောကြာ၊ မတ် ၁၅၊ ၂၀၁၉)
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအ ပါအ၀င် ကြီးကျယ်သည့်စီမံကိန်း များကုို အစုိုးရက တာဝန်သိသိဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး ဆုံးဖြတ် ချက်ချပါက မည်သည့်အတွက် ကြောင့်ဖြစ်သည်ကုို အများပြည် သူသိရှိစေရန် ရှင်းလင်းမည်ဟု နုိုင်ငံတော်၏ အတုိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြော သည်။
လွှတ်တော်ဂုဏ်သိက္ခာ ထိပါးစေသည့်ဆွေးနွေးချက်များ အရေးယူရန် ဒီချုပ်အမတ်အကြံပြု
ပုဒ်မ ၂၆၁ ပြင် ဆင်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း လေ့ လာစိစစ် ပူးပေါင်းကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်သက်ပြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အချို့ ဆွေးနွေးမှုသည် လွှတ်တော် ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိပါးစေခြင်း၊ လွှတ်တော်တွင်း ဆောင်ရွက်ချက် များကို အထင်မှား၊ အမြင်မှားဖြစ် စေခြင်းအပေါ် အရေးယူရန် အ မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင် ထွေးက အကြံပြုသည်။
ရွှေတိဂုံစေတီရွှေပြားအချို့ အရောင်မှိန်လာခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စစ်ဆေးမှုပြီးစီးပါက အရေးယူဆောင်ရွက်မည်
ရွှေတိဂုံစေတီ ကြာ မှောက်၊ ကြာလှန်နေရာများ၌ ရွှေပြားများ အရောင်မည်းလာ သည့်ဖြစ်စဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကော် မတီဖွဲ့ စစ်ဆေးနေသည်မှာ မပြီးပြတ်သေးကြောင်းနှင့် စစ်ဆေးပြီး ပါက ဥပဒေအတိုင်း အရေးယူမှု များရှိမည်ဟု ရွှေတိဂုံစေတီဂေါ ပကအဖွဲ့က မတ်လ ၁၄ ရက်တွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ် ပြောကြားသည်။
ပုဒ်မ ၅၉(စ)ပယ်ဖျက်ရန် အဆိုပြုချက် ခြေဥပြင်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေး
နိုင်ငံတော် သမ္မတ အရည်အချင်းနှင့်ပတ် သက်၍ ကန့်သတ်ထားသည့် ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပုဒ်မ ၅၉ (စ) ကို ပယ်ဖျက်ရန် ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီ အစည်းအဝေး ၌ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် (NLD) အပါအ၀င် ပါတီအ ချို့က ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ကော်မ တီဝင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ရှစ်မြို့နယ်တွင် ယခုလကစ၍ Wave Money ဖြင့် ပင်စင်လစာထုတ်ယူနိုင်
ရန်ကုန်တိုင်းရှစ် မြို့နယ်တွင် အငြိမ်းစားပင်စင်လ စာများကို Wave Money ဖြင့် မတ်လ ၂၁ ရက်က စတင်ထုတ်ယူ နိုင်ကြောင်း စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာ ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်းက ပြောသည်။
ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကို Smart Pagoda ဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်မည်ဟုဆို
ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကို Smart Pagoda ဖြစ်သည်အထိ ဆောင်ရွက်မည်ဟု ရွှေတိဂုံစေတီ တော်ဂေါပကအဖွဲ့က ယမန်နေ့ တွင် ပြုလုပ်သည့်သတင်းစာရှင်း လင်းပွဲ၌ ပြောသည်။
စွန့်ပစ်အမှိုက်များ ပြန့်ကျဲ နေသည့်နေရာ တစ်ခုတွင် အသက် (၂၀)ကျော်လူငယ်တစ်ဦး ခါး ထောက်ရပ်နေသည့် ဓာတ်ပုံနှင့် ယင်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အဖြစ် သန့်ရှင်းနေသည့်မြေပြင်၌ ၎င်းလူ ငယ်ကပင် အမှိုက်အိတ်များနှင့်အ တူရပ်နေသည့် ဓာတ်ပုံ လူမှုကွန် ရက်တွင် ယှဉ်တွဲဖော်ပြရာမှ အ
၂၀၁၅ က Revival တေးအယ်လ်ဘမ်အ ထွက်ရှိပြီး အယ်လ်ဘမ်သစ်အ တွက် လောလောဆယ်အသံ သွင်းနေသော အဆိုတော်ဆယ်လီ နာဂိုမက်ဇ်က အသံသွင်းရအဆင် ပြေသော်လည်း ဆုံးဖြတ်ချက်အ မှားများချမိမည်ကို စိုးရိမ်နေသော ကြောင့် အလျင်စလိုမဖြစ်စေရန် ကြိုးစားနေသည်ဟု ပြောသည်။
Central Prestige တာဝါအရောင်းပြခန်း မတ်လ ၁၇ ရက် မိတ်ဆက်မည်
အခန်း ၄၀၀ ခန့် ပါဝင် မည့် The Central Prestige လူ နေအိမ်ခန်းတာဝါအရောင်းပြခန်း ကို မတ်လ ၁၇ ရက်တွင်မိတ် ဆက်မည်ဟု အဆိုပါအိမ်ရာစီမံ ကိန်းတည်ဆောက်သည့် Marga Landmark ကသတင်းထုတ်ပြန် သည်။
Summer Angel သင်္ကြန်ခွေ အမြန်ထွက်ခဲ့တဲ့အကြောင်း ပြောပြတဲ့ ဇော်ဝင်းထွဋ်
Summer Angel သင်္ကြန်သီချင်းခွေသည် အနုပညာသက် တမ်းတစ်လျှောက် ထုတ်ခဲ့သည့် အခွေများတွင် အမြန်ဆုံးထွက်ရှိ နိုင်သည့် အခွေဖြစ်ကြောင်း ဇော် ဝင်းထွဋ်က ပြောသည်။
ဇာတ်ကားရိုက်ကူးရေး ကျဲပါးတဲ့အကြောင်းပြောပြတဲ့ သက်မွန်မြင့်
ကမ်းလှမ်းသည့် ဇာတ်ကားတိုင်းကို လက်မခံဘဲ ယခင်ထက်ပိုစိစစ်ပြီး ဇာတ်ကားကောင်းများ ရွေးချယ်ရိုက်ကူးဖြစ်၍ ဇာတ်ကားရိုက် ကူးရေးကျဲပါးကြောင်း သရုပ်ဆောင် သက်မွန်မြင့်ကပြောသည်။
MNA က အမေရိကန်ကုမ္ပဏီထံမှ ဘိုးရင်းလေယာဉ်များ လတ်တလော ငှားရမ်းရန် မရှိသေးဟုဆို
အမေရိကန်အခြေစိုက် GE Capital Aviation Services ထံမှ ဘိုးရင်း 737-8 MAX လေ ယာဉ်လေးစီးငှားရမ်းရန် ယခင်က စီစဉ်ထားသော်လည်း ယခုအခါ လေကြောင်းလိုင်းစီးပွားရေးအရ လေယာဉ်အစီးရေ လတ်တလော တိုးချဲ့ရန် အစီအစဉ်မရှိသေး ကြောင်း မြန်မာအမျိုးသားလေ ကြောင်းလိုင်း (MNA)
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ ချီးကျူးမှုကိုခံရတဲ့ နေတိုး
တာတူးရုပ်ရှင်မှ နေတိုး ၏သရုပ်ဆောင်မှုကို အတူတွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ထားသည့် လွင်မိုး နှင့် သက်မွန်မြင့်က ချီးကျူးခဲ့ကြ သည်။
ယနေ့ညကစားမည့် ဆယ်လ်တာဗီဂိုနှင့်ပွဲတွင် ဇီဒန်း ဒုတိယအကြိမ် စတင်ကိုင်တွယ်မည်
ဇီဒန်းသည် ရီးရဲလ် မက်ဒရစ်သို့ အံ့အားသင့်ဖွယ်ပြန် လာပြီးနောက် ယနေ့ညကစား မည့် ဆယ်လ်တာဗီဂိုနှင့်ပွဲ၌ ဒုတိ ယအကြိမ် ပြန်လည်ကိုင်တွယ် မည်ဖြစ်သည်။
ဒုတိယအကြိမ် ကျောက်စိမ်းထိပ်သီး အစည်းအဝေးတွင် မြန်မာ-တရုတ် သဘောတူညီချက်ငါးချက် လက်မှတ်ရေးထိုး
နေပြည်တော်၌ ပြုလုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ် အာရှဒေသတွင်း ကျောက်စိမ်း ထိပ်သီးအစည်းဝေးတွင် မြန်မာနိုင်ငံကျောက်စိမ်း အချောထည်ဈေး ကွက် ပိုမိုခိုင်မာစေရေးအပါအဝင် သဘောတူညီချက် ငါးချက်ကို မြန်မာနှင့် တရုတ်ကုမ္ပဏီများ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
လီဗာပူး ဥရောပထိပ်သီးဖြစ်လာပြီဟု နည်းပြကလော့ပ် ကြွေးကြော်
ချန်ပီယံလိဂ်တွင် ဘိုင် ယန်မြူးနစ်ကို ၃-၁ ဂိုးဖြင့် အနိုင် ရပြီးနောက် လီဗာပူးအသင်းသည် ဥရောပဘောလုံး ထိပ်တန်းအ ဆင့်သို့ ပြန်လည်ရောက်လာပြီ ဟု နည်းပြဂျာဂန်ကလော့ပ်က ကြွေးကြော်သည်။
ပြည်တွင်း ငွေကြေး ဈေးကွက်တွင် မတ်လ ဒုတိယ ပတ်က စတင်ပြီး အမေရိကန်ဒေါ် လာတန်ဖိုးပြန်လည်မြင့်တက်လာ သည်။ တစ်ဒေါ်လာ ၁,၅၁၀ ကျပ် ခန့်တွင် တည်ငြိမ်ခဲ့သော ဒေါ်လာ တန်ဖိုးသည် မတ်လ ၁၄ ရက်တွင် ၁,၅၂၀ ကျပ်သို့ မြင့်တက်လာ သည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသို့ပို့မည့် စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား တစ်သိန်းခွဲကျော်နှင့် ဘင်္ဂါလီနှစ်ဦးကို နတ်မြစ်အတွင်း ဖမ်းမိ
မောင်တောမှ ဘင်္ဂ လားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ ပို့မည့်ကျပ်သိန်း သုံးထောင်ကျော်တန်ဖိုးရှိ စိတ် ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား တစ်သိန်းခွဲ ကျော်နှင့် ဘင်္ဂါလီနှစ်ဦးကို ဖမ်းမိ ခဲ့သည်။
မြောင်းမြတံတား ဧပြီ ၁ ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်မည်
တည်ဆောက်မှု ၉၂ ရာ ခိုင်နှုန်း ပြီးစီးပြီဖြစ်သည့် မြောင်း မြတံတားကို သတ်မှတ်ရက်အ တွင်းဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း အ ဆိုပါ တံတားတည်ဆောက်နေသော တံတားဦးစီးဌာန တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့(၁) ညွှန်ကြားရေးမှူး(မြို့ပြ)ဦးမျိုးဝင်းက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်နည်းစနစ် ကော်မတီကို အသစ်ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦးသန်းတိုးအောင်က တာဝန်ယူမည်ဖြစ်သည်။
ဖူဆယ်လိဂ်တွင် MIC နှင့် VUC အသင်း ချန်ပီယံလုမည်
ဖူဆယ်လိဂ်နောက်ဆုံး ပွဲတွင် အမှတ်ပေးဇယားထိပ်ဆုံးမှ MIC နှင့် ဒုတိယနေရာမှ VUC အသင်းတို့ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံနေ ပြီး ချန်ပီယံအဆုံးအဖြတ်ပွဲစဉ် ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာ စားပွဲတင်တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲတွင် ကြည်မြင့် ရွှေတံဆိပ်ဆွတ်ခူး
တိုင်ပေတွင် ကျင်းပ သည့် နိုင်ငံတကာစားပွဲတင် တင်း နစ်ပြိုင်ပွဲ၌ မြန်မာကစားသမားကြည်မြင့်က အာရှနာမည်ကြီး ကစားသမားများကို ကျော်ဖြတ်၍ ရွှေတံဆိပ်ဆုဆွတ်ခူးခဲ့သည်။
လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်များ မေးမြန်းသည့် မေး ခွန်းများဖြေဆိုရာတွင် ဝန်ကြီးဌာန များအနေဖြင့် လိုရင်းဖြစ်သော ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ တိတိပပ ဖြေကြားရန် အမျိုးသားလွှတ်တော်အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီက အကြံပြုသည်။
စည်ပင်ရွေးကောက်ပွဲ အကြောင်းအသိပညာပေးအစီ အစဉ်ကို ရုပ်ရှင်ရုံများတွင် ပြသ မည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ပြောသည်။
ကျောက်မျက်ပြပွဲများ၌ သတ်မှတ်အခွန်ပေးဆောင်မှုနှင့် အဂတိလိုက်စားမှု ရှိ၊ မရှိ အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းစစ်ဆေးမည်ဟု ဝန်ကြီးဌာနက လွှတ်တော်သို့ တင်ပြ
မန္တလေးတိုင်းဒေ သကြီးအစိုးရအဖွဲ့ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကျင်းပသည့် ကျောက်မျက်ပြပွဲများ၌ သတ်မှတ်အခွန်ပေးဆောင် မှု ရှိ၊ မရှိနှင့် အဂတိလိုက်စားမှုရှိ၊ မရှိ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ ပါဝင်သော အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပြီး စစ်ဆေးမည်ဟု သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရေးဝန်ကြီးဌာနက လွှတ်တော်သို့ ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
ကချင်ပြည်နယ်ရှိ တစ်သျှူးငှက်ပျောစိုက်ခင်းများတွင် တားမြစ်ဓာတုပိုးသတ်ဆေးများ စစ်ဆေးတွေ့ရှိ
တရုတ်ကုမ္ပဏီများပါ ဝင်ပတ်သက်နေသော ကချင်ပြည် နယ်ရှိ တစ်သျှူးငှက်ပျောစိုက်ခင်း များတွင် တားမြစ်ဓာတုပိုးသတ် ဆေးများ သုံးစွဲနေသည်ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိ၍ သတိပေးထား ကြောင်း ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးမွေးမြူ ရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးကျော်ကျော်ဝင်းက ပြောသည်။
ဆွာရေကာတာရေပိုလွှဲကျိုးကျ၍ ရေဘေးကြုံခဲ့သော ကျွန်းတောစုရွာဒေသခံများနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွေ့ဆုံမည်
ပြီးခဲ့သည့်နှစ် သြဂုတ်ကဆွာရေကာတာရေပိုလွှဲကျိုးကျ၍ ရွာလုံးကျွတ် ရွှေ့ပြောင်းရသော ကျွန်းတောစုရွာ ဒေသခံများကို နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မတ် လ ၁၅ ရက်(ယနေ့) တွင် လာ ရောက်တွေ့ဆုံမည်ဟု ရေတာ ရှည်မြို့နယ် ဒေသခံများက ပြော သည်။
ကွန်ရက်အသုံးပြုမှု ပြတ်တောက်ခြင်းသည် DDoS တိုက်ခိုက်ခံရခြင်းမဟုတ်ဟု ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ထုတ်ပြန်
မတ်လ ၁၃ ရက်တွင် ကွန်ရက်အသုံးပြုမှု ပြတ်တောက် ခြင်းမှာ DDoS တိုက်ခိုက်ခံရခြင်း (ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးကို ရပ်တန့် အောင် တိုက်ခိုက်သည့်နည်း စနစ်) မဟုတ်ကြောင်း Facebook ကုမ္ပဏီက ယင်းနေ့ ည ၁၂ နာရီ ခန့်တွင် ထုတ်ပြန်သည်။
GGS ကုမ္ပဏီထံမှ ရရန်ဓာတ်ငွေ့ဖိုးကြွေးကျန် ကျပ်သန်းကိုးထောင်ခန့်ရှိလာ
တနင်္သာရီတိုင်း ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒေါက်တာလဲ့ လဲ့မော်၏ အဂတိအမှုတွင် တာ ၀န်ရှိသူအချို့ပူးတွဲအရေးယူခံ ထားရသည့် Global Grand Service (GGS)ကုမ္ပဏီထံမှ ရရန် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဖိုးကြွေးကျန် စုစုပေါင်းသည် မတ်လ ၁၄ ရက် အထိ ကျပ်သန်းကိုးထောင်ခန့်ရှိ ကြောင်း လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန် ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ် လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ဦးဆောင်ညွှန် ကြားရေးမှူးဦးခင်မောင်ဝင်းက ပြောသည်။